कति 4-DHEA टेस्टोस्टेरोनमा बदलिन्छ? | AASraw
/ब्लग/4-DHEA , ग्यालरी/कति 4-DHEA टेस्टोस्टेरोनमा रूपान्तरित हुन्छ?
प्रकाशित 06 / 30 / 2018 by Dr. Patrick Young मा लेखियो 4-DHEA, ग्यालरी. यो संग0टिप्पणी.
4-DHEA को बारेमा सबै कुरा
1 के छ 4-DHEA
2। कसरी 4-DHEA कार्य गर्दछ
3। 4-DHEA एक प्रोहोरोन
4। के 4-DHEA फाइदाहरू छन्?
5। 4-DHEA एक Anabolic स्टेरियोड छ
6। कसरी 4-DHEA प्रयोग गर्ने?
7। 4-DHEA साइड इफेक्टहरू कसरी निस्कने
8। धेरै 4-DHEA टेस्टोस्टेरोनमा परिवर्तित हुन्छ
9। DHEA र 4-DHEA बीचको भिन्नता के हो
बिक्रीको लागि 11.4-DHEA
4-DHEA पाउडर भिडियो
I.4-DHEA पाउडर आधारभूत क्यारेक्टरहरू:
रंग: सेतो वा अफ सेतो क्रिस्टलीय पाउडर
1। 4-DHEA के हो?
4-DHEA पाउडर, CAS 571-44-8, 4-androstene-3-ol, 17-one, 3β-Hydroxy-4-androsten-17-one, 3β-hydroxyandrost-4-en-17-one, 3β-hydroxy को रूपमा पनि भनिन्छ। -D4-androsten-17-one, 3β-hydroxyandrost-4-en-17-one, 3β-hydroxy-etioallocholan-4-en-17-one। 4-Dehydroepiandrosterone (4-DHEA) स्टेरॉइड भनेको 5-dehydroepiandrosterone को isomer हो।
4-DHEA पाउडर एक स्वाभाविक रूप देखि गैर-मीथाइलित (गैर-17AA) प्रो स्टेरॉइड हो। यद्यपि 4-DHEA एस्ट्रोजेनमा अर्गोमेज गर्न सक्दछ यो सम्भवतः उच्च एस्ट्रोजन सम्बन्धित साइड इफेक्टको कारण हुन सक्दैन। समग्र परिणाम समान हुनेछ वा मूल 4-AD लाई 2004 मा फिर्ता निषेध गरिएको छ। यस कम्पाउण्डको उच्च खुट्टाले माटोमा सुधारका साथ मांसपेशी जनमा पर्याप्त दुबारा लाभ पुर्याउनेछ। यो उत्पादनले एस्ट्रोजेन रूपान्तरणबाट केही ब्लोट उत्पादन गर्न सक्छ, जुन aromatase अवरोधक को व्यवस्थापन गरेर प्रतिबन्धित हुन सक्छ, तर यो ठूलो मात्रा मा यो कम्पाउन्ड प्रयोग गर्न को लागी शुरु गर्न को लागी संग शुरू गर्न सक्छ।
आणविक सूत्र C19H28O2
पिल्ट बिन्दु 138-141 ℃
भण्डारण तापमान कोठाको तापक्रम
रंग सेतो वा अफ सेतो क्रिस्टलीय पाउडर
वितरण समय 12 घण्टा भित्र भुक्तानी पछि
भुक्तानी विधि WU, MG, BT, TT
प्याकेज पन्नी थलो वा अनुकूलन
विवरण 4-DHEA एक स्वाभाविक रूप देखि गैर-मीथाइलित (गैर-17aa) प्रो-स्टेरॉइड हो। 4-DHEA, DHEA जस्तै, 2b-HSD र 3b-HSD समावेश एक 17 चरण रूपांतरण प्रक्रिया को लागि यसलाई एन्ड्रोस्टेनईईओन / androstenediol मा परिवर्तित गर्न को लागी, र त्यसपछि टेस्टोस्टेरोन। कुन 4-DHEA DHEA बाट थोडा फरक बनाउँछ 4th को तुलनामा 5th स्थितिमा एक डबल बाण्ड हो। यसले 4-DHEA कम एस्ट्रोजेनिक्सलाई प्रत्यक्ष रूपमा अभिनय नगरेको जस्तै DHEA जस्तै एस्ट्रोजेन रिसेप्टरमा कार्यान्वयन गर्न सकेन।
किनकि यो यौगिक स्वाभाविक रूप देखि भैरहेको छ र गैर-मेथाइलित समग्र साइड इफेक्ट एकदम हल्का हुनेछ। तथापि, उच्च खुट्टाले तेल छाला, मुँहासे र रक्तचाप वृद्धि गर्न सक्छ। किनभने यस स्टेरॉइड गैर-17AA छ भने यसलाई नकारात्मक चिन्तालाई एचडीएल / LDL अनुपातमा असर पार्ने बारे कम हुनुपर्छ। किनकि यो कम्पोजुन्ट टेस्टोस्टेरोनमा परिवर्तित हुन सक्छ किनभने यसले DHT र अन्य 5A-कम मेटाबोलाइटमा रूपान्तरित गर्न सक्छ। यो प्रोस्टेन्सील वा अपेक्षाकृत गैर-एंड्रोजेनिक यौगिकहरूको साथ राम्रो स्ट्याकको रूपमा सेवा गर्न सक्छ जुन अङ्ग्रेजी क्षमता र कमीको कारण libido वा gyno संग समस्या सिर्जना गर्न सक्छ।
2। 4-DHEA कसरी काम गर्दछ?
उपभोग गरे पछि, 4-DHEA (4-Andro) तपाईंको रक्तचाप प्रवेश गर्दछ र टेस्टोस्टेरोन मा धर्ती गर्दछ। यौगिकले तपाईंको यौन ड्राइव बढाउने बेलामा आकार र शक्ति बढाइको परिणामस्वरूप, ध्यानपूर्वक उच्च एनाबोलिक व्यवहार गर्न सुरु गर्नेछ - तपाईलाई अविश्वसनीय "अल्फा नर एक्स्टसी।"
3। के 4-DHEA (571-44-8) एक प्रोमोर्मोन?
प्रोहोरोन के हो?प्रोहोर्मोन अधिकतम हार्मोन परिणामहरूको लागि सस्ती समाधान हो। प्रोहोर्मोनहरू यौगिकहरू हुन् जुन मौखिक रूपमा लिइन्छ। प्रोहोरोनले यौगिक कार्यहरू हार्मोनको लागि पूर्ववर्ती हुन्। तिनीहरूको आफ्नै, तिनीहरू प्रभावकारी छैनन्। तिनीहरूको काम रक्तचापको माध्यमबाट फैलिएको छ। एकपटक हार्मोनमा हार्मोनमा रूपान्तरण भएपछि, यो हार्मोनको स्तर समायोजन गर्दछ। एथ प्रोटीन हुने प्रोहोरोनको बारे सोच्नुहोस् जुन एथलीट प्रदर्शन र मांसपेशी स्वास्थ्य सुधार गर्न प्रोटीन परिवर्तन गर्दछ।
4-DHEA एक प्रोहोरोन हो, र स्पष्ट हुनु, 4-DHEA प्रोहोरोन होइन किनभने यो दुई रूपान्तरणहरूको लागि टेस्टोस्टेरोनमा फर्कन आवश्यक छ। त्यसोभए, 4-DHEA को एक "प्रो-प्रो-हार्मोन" को रूपमा सोच्नुहोस्।
4-DHEA (4-Andro), एक प्रोहोरोन हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई ईस्ट्रोजनिक अधिभारको नकारात्मक साइड इफेक्ट बिना DHEA बाट लाभ उठाउन अनुमति दिन्छ। 4-DHEA एक स्वाभाविक रूप देखि भएको हो DHEA isomer। DHEA, वा dehydroepiandrosterone, एड्रेनाल ग्रंथि द्वारा उत्पादित हार्मोन हो।
एड्रेनल ग्रैंड एक ग्रंथि हो जुन गुर्दे को माथि मा छ। यो तपाईंको शरीरमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हार्मोनको मुख्य निर्माता हो जुन तपाईंको सेक्स हार्मोन र कोर्टिसोल को विनियमित गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईंलाई राम्रो स्वास्थ्य र अस्तित्वको लागि यी हार्मोन चाहिन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हार्मोन मध्ये एक एड्रेनेल ग्रंथिहरु द्वारा एड्रेनालाइन हो। तनावपूर्ण परिस्थितियों को लागी तपाईंको लडाई या उडान प्रतिक्रिया तपाईंको गुर्दे मा यिनी हार्मोनहरु देखि आउँछ।
हार्मोन DHEA एड्रेनियल ग्रंथिहरु द्वारा उत्पादित, तर मस्तिष्क यो पनि बनाउँछ। DHEA उत्पादनfandrogens र एस्ट्रोजन को लागि अनुमति दिन्छ, जो एक लाभ जो मांसपेशियों को आकार र मांसपेशियों को स्वास्थ्य को बढावा गर्न चाहते हो जो सबै भन्दा चाहेको छ। शरीरको उमेरको रूपमा, शरीरमा DHEA उत्पादन घटाउँछ। शरीरमा DHEA मा कमी हार्मोनल विकारहरूको लागी, यौन क्रियाकलाप घटाउन, र ओस्टियोपोरोसिस।
4-DHEA एक प्रोहोरोन हो जसले स्वस्थ र एरेजनिक गतिविधिलाई संकेत गर्दछ र शरीरमा DHEA स्तरहरू पुनर्स्थापित गर्न सक्छ। यो असुरक्षित रहन्छ जबसम्म प्रक्रियाहरू सही समयमा सक्रिय हुन्छ।
4। 4-DHEA के फाइदाहरू छन्?
4-Androsterone विशेष गरी मांसपेशियों को लाभ को विकास को लक्ष्य, 8 भित्र 12 भित्र4सम्म 6-XNUMX पाउंड प्रोहोरोन चलाउन को लागी। ध्यान दिनुहोस् कि यो प्रभाव सही आहार र कसरत संग अधिक स्पष्ट हुनेछ।
साथै, 4-DHEA फाइदाहरू यी नतिजाहरू आशा गर्दछन्:
-बटर शक्ति र शक्ति
- सुधारिएको काटन
आफ्नो मूड बढाउँछ
पूर्ण रिकभरी समय
उचित पोषक तत्वको समयको साथ, तपाईले व्यायाम प्रक्रिया बाट छिट्टै पुनःप्राप्ति गर्नुहुनेछ तब तपाईले कहिले चक्र बन्द गर्नुभयो।
तपाईं बलियो निर्माण र अधिक शक्तिशाली संगठनहरू देख्नुहुनेछ। तपाईं पनि ध्यान दिनुहुनेछ कि तपाईं बिस्तारमा अधिक ऊर्जा पाउनुहुनेछ।
-नन-मेथिलेट गरिएको छ, त्यसैले तपाईंको जिगर बिग्रेको छ
निस्सन्देह, शीर्ष दुई 4-DHEA (571- 44-8) फाइदा सुधार र मांसपेशी विकासमा सुधारिएको छ। यो एक कुलीन शरीर सिर्जना गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। तेस्रो सर्वोत्तम 4-DHEA फाइदाहरू पुनःप्राप्तमा मद्दत हुनेछन्, त्यसोभए तपाईं अधिक व्यायाम गर्न सक्नुहुन्छ र तीव्र गति प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
5। के 4-DHEA एक Anabolic स्टेरॉयड छ?
टेक्निकल, हो। तर नियमित स्टेरियोड्स र 4-andro बीचको अंतरले संयुक्त राज्यमा यो कानूनी बनाउँछ। 4-DHEA को कारण, 4-andro को लागि वैकल्पिक नाम हो, एक भिन्नता छ कि हाम्रो शरीर स्वाभाविक रूपमा सिर्जना गर्दछ।
DHEA को लागि खडा छ - यो एक बाहिर dehydroepiandrosterone को कोशिश र ध्वनि, जो मानव शरीर मा बनाइएको धेरै प्रचुर मात्रा में परिसर स्टीवियोडों मध्ये एक छ।
एंजाइम रूपान्तरण प्रक्रिया मार्फत, 4-andro पूरक पारंपरिक स्टिरोइडहरू जुन पहिले नै लिभरबाट पास पारिएको छ।
त्यसपछि रक्तचाप पूर्ण फ्लाइड टेस्टोस्टेरोनको रूपमा प्रवेश गर्दछ, जुन तपाईंको शरीरले स्वाभाविक रूप बाट बनाइएको टेस्टोस्टेरोन जस्तै प्रयोग गर्दछ। तैपनि यो तपाईंको लिभर नष्ट गर्दैन, यो सुरक्षित पूरक बनाउन।
शुरुवातकर्ताको लागि, तपाईंले 4-DHEA खुराक गर्नु पर्छ (4-DHEA खुराक) 4-6 हप्ताको लागि, 300-500 मिलीग्रामको बीचमा दैनिक।
मध्यवर्ती वा उन्नत शरीर निर्माणकर्ताहरू वा पावरलिफ्टहरूका लागि, तपाईं 6-8 हप्ताको लागि जान सक्नुहुन्छ र 300-750 मिलीग्राम 4-DHEA खुराक प्रति दिन जान सक्नुहुन्छ।
यो कडा रूपमा पालन गर्नु पर्छ, किनकि 4-andro एक प्रोहोरोन हो जुन यससँग टाढिएको छैन। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं समय र साइकल सहित एक ठोस आलोचना गर्न छौँ।
यो टाइमफ्रेम भित्र, तपाईले मांसपेशियों को विकास को 8-10 पाउंड प्राप्त गर्न को लागी चाहिए।
सबैभन्दा राम्रो तरिका तपाईंको दैनिक खुट्टा विभाजन गर्न, AM मा एक भाग र PM मा अन्य।
वा, इष्टतम नतीजाहरूको लागि, तपाईंको पूरैको एक अर्का ले तपाईंको कसरत र दाँया भन्दा पहिले एक घन्टा अघि। यसले सबै भन्दा मांसपेशी विकास, बल वृद्धि, र पुन: प्राप्ति सुनिश्चित गर्दछ।
7। कसरी 4-DHEA साइड इफेक्टहरू निवारण गर्ने?
4-DHEA (4-Andro) सँग कुनै साइड इफेक्ट / 4-DHEA दुष्प्रभाव को लागी कम छ। तपाइँ एक सानो एस्ट्रोजेन रूपान्तरण, मांसपेशियों को दुखाइ, उच्च रक्तचाप, आक्रामकता र केहि अवस्थामा gynecomastia (gyno) अनुभव हुन सक्छ।
एक एस्ट्रोजन ब्लाकर एस्ट्र्रोजन रूपान्तरण घटाउन आवश्यक छ र gyno साथ साथै अन्य एस्ट्रोजन जोडिएको दुष्प्रभावबाट बचाउन आवश्यक छ। यी प्रभावहरू कम गर्न वा पुरा तरिकाले रखरखाव पूरक संग रोकिएको हुन सक्छ।
8। कति 4-DHEA टेस्टोस्टेरोनमा बदलिन्छ?
यो एक जादुई प्रश्न हो जुन सबै जान्न चाहन्छ। तर दुर्भाग्यवश, जवाफ "यो निर्भर गर्दछ" हो र यसको मतलब यो वास्तवमा व्यक्तिमा निर्भर गर्दछ। यदि तिनीहरूले असामान्य रूप देखि उच्च aromatase स्तर छ भने तपाइँ केहि estradiol प्राप्त गर्न सक्छन्। यदि धेरै एचएसडी एंजाइमहरू छन् भने, तपाईंले टेस्टोस्टेरोनमा ठूलो टक्कर पाउन सक्नुहुन्छ। यो वास्तवमा व्यक्तिमा निर्भर गर्दछ, तर केहि अध्ययनहरूले प्रोहोर्मोनसँग 30% रूपान्तरणमा देखेका छन् - जुन महत्त्वपूर्ण छ।
यो शरीरमा यति धेरै कम्पाइन्टहरूमा बदल्छ किनकि, 4-DHEA (571-44-8) को प्रयोग गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका तपाईंको चक्रमा सानो कोफ्याक्टरको रूपमा हो। 4-DHEA साँच्चै तपाईंको स्ट्याकमा प्राथमिक प्रोहोरोनोन हुनु हुँदैन। यो 1 मा 2-DHEA जस्तै अन्य प्रोहोर्मोन संग संयोजन मा राम्रो तरिकाले प्रयोग गरिन्छ: 1 वा 3: 1 अनुपात (तपाईंको शरीर को प्रकार को आधार मा - ectomorphs को2को उपयोग गर्नु पर्छ: 1, जबकि endomorphs को3को उपयोग गर्नु पर्छ: 1)।
9। DHEA र 4-DHEA बीचको फरक के हो?
DHEA र 4-DHEA बीचको फरक के हो?
मुख्य प्रभावहरू -अतिथि उमेर (युवा ऊर्जा)
-उसेली चल्ला (एंटी-क्याटाटालिक)
-आमोन प्रणाली -उपयोग समूह (नाइट्रोजन अवधारण)
-बहुड भोल्युम (हेमोटपोयोटिक)
-आईजीएफ- 1 र GH
विवरण DHEA "सामान्य" वा नियमित DHEA मानिन्छ। यो तकनीकी रूपमा 5-DHEA भनिन्छ, किनकि डबल बाण्ड 5th स्थितिमा अवस्थित छ।
1980 को जीवन पछि DHEN लाइभ एक्स्टेन्सन भीड मा लोकप्रिय छ। यो सामान्यतया 50-100mg / दिनको खुट्टामा ऊर्जा र सामान्य भलाई समर्थन गर्न यसको क्षमताको लागि प्रयोग गरिन्छ। (1-3) हालै, DHEA को हल्का एनाबलिक र थर्मोजेनिक प्रभावको कारण शरीर संरचना सुधार गर्न DHEA को उच्च खुराक प्रयोग गरिएको छ। (1, 4) यसले DHEA एक क्यालोरी कमी आहारको समयमा काट्न को लागि एक उत्कृष्ट विकल्प बनाउँछ, किनभने DHEA राम्रो मांसपेशी गुण गुणहरू छन्। (1, 17)
DHEA को 1% को दरमा टेस्टोस्टेरोन को रूपान्तरण गर्दछ, तर यसमा 5-androstenediol मा उच्च रूपान्तरण हुन्छ, जहाँ यसको हल्का androgenic र anabolic प्रभाव हुन्छ। (5-8) DHEA थर्मोगेनिक विशेषताहरू यसको रूपान्तरणबाट 7-oxo-DHEA सम्म आउँछ। (4)
DHEA को हल्का androgenic प्रभावहरूको कारणले यो शायद नै नै कपालको क्षति वा मुँहासे उत्पादन गर्दछ। यद्यपि DHEA को मध्यम एस्ट्रोजेनिक प्रभाव छ, यो शायद नै नै gyno वा अवांछनीय एस्ट्रोजेनजन साइड इफेक्ट उत्पादन गर्दछ। (1-3) केहि सचेतक प्रयोगकर्ताहरु लाई DHEA संग चिन्ता वा निवेदन को रिपोर्ट गरेको छ, जो मस्तिष्क मा न्यूरोोस्कोड गतिविधि संग सम्बन्धित छ। (3) तथापि, यो प्रभाव "प्रेरणात्मक ऊर्जा" को रूपमा पनि रिपोर्ट गरिएको छ जुन DHEA को प्रायः रिपोर्ट गरिएको लाभ हो।
DHEA को फाइदाको विस्तृत दायरा र यसको संतुलित हार्मोनल गुणहरूको कारणले यसलाई सजिलै काट्नको लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ वा दुबई सामूहिक भवन चक्र को समयमा लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ। 4-DHEA एक स्वाभाविक रूप देखि भएको हो DHEA isomer। यो ढाँचा नियमित रूपमा DHEA सँग मिल्दछ तर 4th स्थितिमा डबल बान्ड नाटकीय रूपमा यसको प्रभाव परिवर्तन गर्दछ।
4-DHEA लाई 4-androstenediol को तुलनामा 5-androstenediol लाई सजिलै परिवर्तन गर्दछ, नियमित DHEA भन्दा 2x भन्दा यसको एनाबोलिक क्षमता बढाउन। (6-8, 11) 4-DHEA लाई नियमित रूपमा DHEA को तुलनामा टेस्टोस्टेरोनको उच्च रूपांतरण दरको अपेक्षा गरिएको छ। (6, 7) 4-DHEA ले क्यालोरी जलविद्युत थर्मोजेनिक गुणहरूको कमी पनि गर्दैन, यसैले ठूलो प्रभावको लागि उच्च क्यालोरी प्रतिधारण प्रदान गर्दछ। (4) यसले बढि एनाबलिक क्षमता बढायो र थर्मोगेनिक एक्शन घटाउन बलियो, दुबईको ऊतक वृद्धि र वजन बढ्न मद्दत पुर्याउँछ।
4-DHEA हल्का एस्ट्रोजेन रूपान्तरण हुनेछ जुन अरोनोमिजाइज स्टेरॉयड जस्तै एन्ड्रोस्टोन वा 1-DHEA सँग सजिलै संग संतुलित हुन सक्छ।4स्टेरॉयड नियन्त्रण अधिनियममा प्रतिबन्धित मूल "2004-AD" को समान समग्र लाभ हुनेछ।
अन्य DHEA isomers संग, 4-DHEA स्वाभाविक रूप देखि र गैर-विषाक्त हुन्छ। (9) साइड इफेक्ट जस्तै तेल छाला वा कम प्रजनन क्षमता हल्का र अस्थायी रूपमा मानिन्छ। सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष प्रभाव प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन उत्पादनको दमन हुनेछ, जुन एक चक्र पछि PCT आवश्यक हुन्छ। समग्र 4-DHEA एक धेरै सुरक्षित र प्रभावी दुबला मांसपेशी निर्माण एजेन्ट हो।
4-DHEA को मात्र एक पतन यसको उच्च लागत हो जसले उच्च खुराकलाई महत्त्वपूर्ण मांसपेशी निर्माण प्रभाव देख्न आवश्यक छ।
10। शीर्ष5Popular Prohormones
4-DHEA (4-Andro) (4-Androsterone को रूपमा पनि भनिन्छ - 3b-hydroxy-androst-4-ene-17-one) 4-Androstenediol र 1-Androstenedione को पूर्ववर्ती हो, जुन टेस्टोस्टेरोनको पूर्ववर्ती हो। यसको अर्थ दुई चरणीय रूपान्तरण प्रक्रिया मार्फत, 4-DHEA लाई शरीरभित्र टेस्टोस्टेरोनमा बदलिनेछ। 1-Andro जस्तै, यो प्रोहोरोन गैर-मेथाइलित छ र यसैले जिगरलाई विषैले होइन। तथापि, यो एस्ट्रोजेन गर्न को लागि aromatize गर्दछ, यस aromatase अवरोधक (एआई) को प्रयोग यो यौगिक चलाउँदा आवश्यक छ।
4-DHEA को एक राम्रो खुराक प्रदर्शन औषधि (पीईडी) संग व्यक्तिगत अनुभव को आधार मा प्रति दिन 300-750mgs हुनेछ। सिफारिस गरिएको चक्र अवधिको बारेमा, प्रयोगकर्ताले यसलाई 6-8 हप्ताको लागि चलाउनेछ। माथि उल्लेखित रूपमा, तपाइँ चक्रको समयमा एस्ट्रोजन ब्लक गर्न को लागि एक aromatase अवरोधक को प्रयोग गर्नु पर्छ, साथ साथै सामान्य स्तर मा रक्तचाप राख्न को लागी केहि। 4-Andro को प्रयोग पछि, एक मिनी-पीसीटी आवश्यक पर्नेछ। यसमा प्रति दिन 25mg मा क्लोमड, प्रति दिन 20mg मा नोल्वाडक्स र4हप्ताको लागि राम्रो प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर समावेश गर्नुपर्छ।
1-Andro (एन्ड्रोस्टरोनको रूपमा पनि भनिन्छ - 3b-हाइड्रोक्सी-रस्ट-एक्सएनएमएक्स-एएन-एक्सएनएक्सएक्स) एक ईन्जिजन स्टेरॉइड हार्मोन र टेस्टोस्टेरोनको क्षमताको लगभग 1 / 17th सँग एक कमजोर एन्ड्रोजन हो। एकपटक शरीरमा पेश गरीयो, यसले 1-टेस्टोस्टेरोनमा बदल्छ। किनकि यो यौगिकले एस्ट्रोजेन वा डीभीटीमा रूपान्तरित गर्दैन, त्यहाँ कुनै एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्टहरू हुन सक्दैन, जस्तै gynecomastia वा पानी अवधारण। यसबाहेक, 7-Andro ले गैर-मेथाइलेट गरिएको छ, त्यसैले त्यहाँ लिभर विषाक्ततालाई कम वा कुनै पनि हुनुपर्छ, लिभर समर्थन अनावश्यक बनाउन को लागी। यद्यपि, रक्त खरिद नतिजाहरूको लागि यो सम्भव छ कि जिगर एंजाइमहरू थोरै माथि बढाउन देखाउन।
5-DHEA (रासायनिक नाम: 5-DHEA - 3b-हाइड्रोक्सी-रrost-5-ene-17-one) एक हार्मोन हो जसले स्वाभाविक रूपमा मानव शरीरमा एड्रेनेटल ग्रंथहरू (विशेषगरी गुर्दे, लिभर नजिक पुरुषहरूमा परीक्षाहरू)। तपाईं पहिले नै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, DHEA पुरुष र महिला सेक्स हार्मोन (एन्ड्रोइन्स र एस्ट्रोगेन) को पूर्ववर्तीको रूपमा कार्य गर्दछ, र यो Androstenedione मा परिवर्तित गरेर काम गर्छ, जुन त्यसपछि टेस्टोस्टेरोन मा परिवर्तित हुन्छ।
Epi-Andro (जसलाई पनि भनिन्छ: 3b-हाइड्रोक्सी-रस्टाइन-17-one) लाई 5a-reductase एंजाइम द्वारा स्वाभाविक रुपमा उत्पादन गरिन्छ। यो एंजाइम केहि मान्छे मा कम प्रचलित छ, त्यसैले प्राकृतिक उत्पादन व्यक्ति देखि व्यक्ति देखि भिन्न हुनेछ। मौखिक रूपमा लिइयो भने, एपिआई-Androले डायहाइड्रोस्टस्टोस्टेरोन (डीटीटी) लाई बदल्दछ, जुन5टाइम्स एन्ड्रोजेनिकको टेस्टोस्टेरोनको रुपमा रहेको छ, यो दुबला मांसपेशी जन, मांसपेशी कठोरता, बल र आक्रामकता बढ्दै गएको छ। तथ्यको रूपमा, यो प्रोहोरोन प्रयोग गर्दा केही प्रयोगकर्ताहरूले वसा हानिको वृद्धि पनि गरेका छन्। किनकि यो यौगिक "सुक्खा" (कुनै एस्ट्रोजेन रूपान्तरण छैन), यो सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ जब शक्ति प्राप्त गर्न खोज्दा कुनै पनि पानी अवधारणको सामना नगर्न दबाब।
यो विशेष प्रोहोरोनन अनन्य हो किनभने यो बजारमा पनि होइन। यसको नामले सुझाव दिन्छ कि 1,4-DHEA (यो पनि भनिन्छ: 1,4-DHEA - 3b-हाइड्रोक्सी-रस्ट्रा-1,4-diene-17-one) पुरानो बोल्डियनईई प्रोहोरोनोनको नयाँ DHEA संस्करण हो जुन 2012 मा प्रतिबन्ध गरिएको थियो। यस उत्पादन को दुई अपेक्षित लाभ भूख उत्तेजना र संयुक्त मरम्मत हो।
11। 4-DHEA (571-44-8) बिक्रीका लागि
धेरै मानिसहरू उत्तम चक्र र उत्तम प्रोहोरोनोनको बारेमा जान्न चाहन्छन् किनभने प्रत्येक प्रोहोरोन प्रयोगका लागि धेरै गलत सूचना र किन उनीहरूलाई निश्चित तरिका लिनु पर्छ।
जब तपाईं बल र मांसपेशियों को स्वास्थ्य को बढावा गर्न चाहते हो, प्रोहोर्मोन 4-DHEA इष्टतम स्वास्थ्य र मांसपेशी प्रदर्शन देखि लाभ को एक तरीका हो। 4-DHEA एक प्रोहोरोन हो जसले नाइट्रोजन अवधारण, बल, र मांसपेशीमा रक्त प्रवाह को मात्रा बढाउँछ। तपाईंको शक्ति-प्रशिक्षण र शरीर निर्माण कार्यक्रममा 4-DHEA थपेमा कम्तिमा साइड इफेक्टहरूको प्रभावकारी परिणामहरू छन्।
4-DHEA आधा जीवन छोटो छ, तपाईले लगभग कुनै पनि यौगिक वा प्राकृतिक एनालिलिकको साथ कुनै पनि अवांछित साइड इफेक्टको बारेमा चिन्ता नगरिकन यसलाई 1-Andro र Epi-Andro (सूखी यौगिकहरू) सँग तुलनात्मक रूपमा बनाइन्छ किनभने यो कम से कम वा अतिरिक्तबाट बचाउनमा उत्कृष्ट काम गर्दछ। पानी अवधारण।
यो 4-DHEA बिक्री को लागी अनलाइन, AASraw (www.aasraw.com) को प्रोमोर्मोन सीरीज उत्पादनहरु कच्चे माल, राम्रो गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी मूल्य, सुरक्षित र छिटो वितरण सेवा प्रदान गर्न को लागी मुश्किल छैन।
टैग: 4-DHEA पाउडर, 4-DHEA पाउडर खरिद गर्नुहोस्
डिसेजिस्टेल पाउडर बिक्रीको लागि: समीक्षा र डोजज र प्रभाव मेन्जेल्रोल एसीटेट पाउडरको लागि सबैभन्दा व्यापक परिचय